Wasiirkii hore ee amniga ee Puntlland Gen.C/llaahi Siciid Samanter dib ugu soo laabtay Boosaaso
Boosaaso:-Wasiirkii hore ee amniga ee dowllada Puntlland Gen.Cabdullaahi Siciid Samanter oo ay horay u soo raaceen odayaal uu ka mid yahay yahay Maxamed Cumar Dhigic Dhigic ayaa maanta soo gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari. Wafdiga la socda Wasiirkii hore ee amniga dowllada Puntlland Gen. Siciid Samatar ayaa waxaa ay iska soo raaceen magaalada Dubai oo ay ku yeesheen shirar kale duwan, Odayaashaan ayaa ah siyaasiyiin ku soo jiray siyaasada dalka Soomaaliya waxaan la sheegayaa in odayaashu ay u kala dabqaadi doonaa madaxwey naha Puntlland Dr.Cabdi raxmaan Faroole iyo Gen .Siciid Samatar iyo rag kale oo siyaasiyiin ah oo iyagu doonaya in xukunka talada Puntlland ay qabtaan.
Wasiirkii hore ee amniga ee dowllada Puntlland Gen.Cabdullaahi Siciid Samanter iyo odayaasha la socday ayaa waxaa loo galbiyey guriga uu ka degan yahay magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari. Socdaalka uu manta ku yimid magaalada Boosaaso Wasiirkii hore ee amniga ee dowllada Puntlland Gen.Cabdullaahi Siciid Samanter ayaa ku soo beegmaysa xili uu magaalada Boosaaso ku sugan yahaya Madaxweynaha dowllada Puntlland Dr. Cabdiraxmaan Faroole.
Wasiirkii hore ee amniga ee Puntlland Gen.Cabdullaahi Siciid Samanter ayaa ku celiyey in uusan aqoonsanaynay baarlamaanka Puntlland oo uu waqtigoodu dhamaaday , dowllada hadda uu madaxweynaha ka yahayna Dr. Cabdiraxmaan Faroole uu waqtigeedu ku eg yahay 7.1.2013 loona baahan yahay waqtigaas ka dib in la qabto doorasho xor ah, Wasiirkii hore ee amniga ee dowllada Puntlland Gen. C/llaahi Siciid Samanter ayaa ku celceliyey in uusan doonayna in uu qalalaaso siyaasadeed ka abuuro Puntlland uuna yahay raggii wax ka dhisay uusana marna aqbali karin in uu isagu uu ka shaqeeyo burburkeeda.
Wasiirkii hore ee amniga ee dowllada Puntlland Gen.Cabdullaahi Siciid Samanter ayaa baaq u jeediyey Isimada Puntlland isagoo ugu baaqay in ay wax ka qabtaan is afgaran waaga ka dhexeeya Musharaxiinta u taagan tartanka xilka Madaxweynanimada iyo dowllada Puntlland si loo badbaadiyo burbur iyo khalkhal ku yimaado jiritaanka Puntlland.
Warar hoose ayaa sheegay in Wasiirkii hore ee amniga ee dowllada Puntlland Gen.Cabdullaahi Siciid Samanter iyo odayaasha la socda ay dhici karto in ay dhexdhexaadin ka dhex bilaabaan Madaxweynaha dowllada Puntlland Dr C/raxmaan Faroole iyo siyaasiyiinta u taagan tartanka xilka Madaxweynanimada Puntland si ay iskula meel dhigaan khilaafka ka dhex aloosan ee ku saabsan waqtiga u harsan dowllada iyo baarlamaanka Puntlland.